Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Samuel Chukwueze Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Ihe omuma anyi nke Samuel Chukwueze na agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, Ugbo, Net Worth, Lifestyle and Life Life.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu Nigeria. Ọ na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ gbasara onwe gị na-atọ gị ụtọ, nke a bụ oge ọ bụ nwata gaa na galari nke ndị okenye - nchịkọta zuru oke nke Samuel Chukwueze's Bio.
Mbido na mbilite nke Samuel Chukwueze.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ịbawanye na mkpebi siri ike ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị akụkọ ndụ Samuel Chukwueze nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a, na-ebughị ụzọ, ka anyị bido.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “SAMU". Samuel Chimerenka Chukwueze Amuru ya na abali iri abuo na asaa nke onwa Mee 22 n’obodo Umuahia na Abia Steeti. Ọ bụ onye mbụ n’ime ụmụaka atọ amụrụ nne ya na nna ya amachaghị.
Agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ agbụrụ ya na obodo nwanne ha bi na Umuahia ebe o toro na nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị tọrọ.
Nwatakịrị Samuel Chukwueze etolitere na Umuahia city na Nigeria.
Mgbe o tolitere Umuahia, Chukwueze dị naanị afọ 5 mgbe ọ hụrụ n'anya egwuregwu bọọlụ site na ilele Idol dị na nwata Jay-Jay Okocha na-egwu ma na-egosiputa ọgbụgba ọkụ na egwuregwu televised. Mgbe Chukwueze nọ na ya, ọ na-eche na ya ga-eso n'akụkụ arụsị ya na ọdịnihu ndị ọzọ.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ka afọ na-aga, Chukwueze nwere nnukwu ego na-egwu bọọlụ kwa ụbọchị, bụ ọrụ ọ gbalịsiri ike ijikọ na ịmụ akwụkwọ na Government College Umuahia na ụlọ akwụkwọ nke Evangel Secondary mechara. Onye na-eto eto nke nwere mmasị na onye na-egwu bọl nwere afọ ga-ekweta na ọ kpachaara anya chụọ àjà ịmụ banyere ebe ịchụgba bọl. Dị ka ya:
Abụ m ezigbo nwa akwụkwọ, ma ịhụnanya m nwere n'ịkụ bọl mechara kwụsị ilekwasị anya m mgbe m jizi nwayọọ nwayọọ na-enwe mmasị ịmụ ihe. ”
Ọganihu ahụ adịghị mma na nne na nna Chukwu na nwanne nna ya nke mere ihe niile ha nwere ike ime iji mee ka ọ lekwasị anya n'ịmụ akwụkwọ. N'ezie, ha gbara ọkụ akpụkpọ ụkwụ Chukwueze na ngwa ọzụzụ ka ha laa n'ụlọ ka ọ dị njọ mana nwatakịrị ahụ etinyelarị aka ọ bụla na ịgba egwu bọọlụ.
Ọkụ akpụkpọ ụkwụ Chukuweze adịghị nso iji gbochie ya ịgba bọl ..
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Ndụ Ndụ Mmalite
N'agbanyeghị agbanyeghị nne na nna Chukwueze na-akwadoghị maka njikọ aka nke football ya, nwata ahụ raara onwe ya n'ịkụ maka agụmakwụkwọ nke o chere na ọ nwere ike ime ka nrọ ya bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. N’ikwu okwu banyere agụmakwụkwọ, Chukwueze bidoro site na ndị otu Future Hope U-8 & U-10 ogologo oge tupu ọ bụrụ nwata akwụkwọ sekọndrị.
Egwuregwu nke football nke gara n'ihu na nkuzi nkenke na New Generation Academy mechara sonye na Diamond Football Academy na 2012 ma kpụzie ya ka ọ bụrụ ọkpọka asọmpi. Ọ bụ na Diamond Academy mere Chukwueze so n'òtù ndị otu ya gara maka asọmpi asọmpi Iber Cup nke ndị ntorobịa 2013 bụ nke ha meriri na Chukwueze bụ onye kachasị nweta goolu.
Egwuregwu ndị ntorobịa Iber Cup nke 2013 meriri ndị otu mmuta Diamond Academy na Chukueze pụtara dịka onye goolu kachasị elu
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Ụzọ E Si Mara Aha
Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, Chukwueze ruru atụgharị uche na ebumnuche ọrụ ya mgbe ọ nwetara ọnọdụ na ndị otu Nigeria nke meriri iko FIFA FIFA U2015 nke 17 na Chile, ihe omume gosipụtara ndị na-eto eto dị ka. Trent Alexander-Arnold, Eder Militao na Christian Pulisic. Followinggbaso ndị dike iko ụwa, Chukwueze bidoro ịdọta mmasị n'ọtụtụ ndị otu Europe.
Chukwueze dị afọ iri na isii so na ndị otu Naịjirịa nke meriri 16 FIFA U2015 iko mba ụwa na Chile.
Ọ gara na nke Salzburg, PSG, Porto ebe Arsenal nọ nso ịmịnye ya n'ime usoro ntorobịa ha. Agbanyeghị, nwata ahụ nyefere Villarreal bụ nke nwere ihe ka mma maka ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ football Diamond. Mgbe ọ bịarutere Villarreal, Chukwueze nọrọ ọnwa ole na ole na-alụ ọgụ maka nsogbu asụsụ yana ịmara nri Spanish mana ọ kweghị ka ihe ịma aka ndị ahụ megharịa ya ka ọ ghara ịmasị na otu egwuregwu Juvenil A nke Villarreal.
“Amaghị m ihe a na-enye m mgbe m rutere, Villarreal. Anụ ahụ ... Ọbara nwere ebe niile! Agbalịsikwara m ike ịghọta Spanish tupu m nwee nrọ nke ịsụ ya. ”
Na-echeta Chukwueze nke mmalite ụbọchị ya na Villarreal.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Na-ewu Onwe Gị Akụkọ
N'oge na-adịghị anya Chukwueze mechara bụrụ onye izizi mbụ ya na Villarreal na Eprel 2018, e gosipụtara ya na egwuregwu otu egwuregwu bọọlụ na Septemba n'otu afọ ahụ wee gaa n'ihu gosipụta onwe ya dị ka onye na-atụ egwu n'egwuregwu na-emecha nke ọma nke na ọ dị ka akụkọ egwuregwu bọọlụ. Arjen Robben.
A ma Samuel Chukwueze ama maka ịba mba na mkpebi ya.
Chukwueze mechara rụpụta ihe dị ka otu afọ mgbe ọ mechara soro na ndị otu ndị Nigeria meriri ọla kọpa na asọmpi iko mba Africa nke 2019. UEFA depụtara aha ya dị ka otu n'ime ndị na-eto eto iri ise na-elele ụwa nke football n'otu afọ ahụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Ezigbo Ndụ Mmekọrịta
N'ịga n'ihu na ndụ ịhụnanya Samuel Chukwueze, onye winger nwere ike ịbụ di na nwunye n'oge edere bio a. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ahụbeghị ya mma ọ bụla na Spanish ma ọ bụ Naijiria nke enwere ike iwere dị ka enyi nwanyị ya.
Nwatakịrị, onye ịga nke ọma na onye na-arụsi ọrụ ike bụ Samuel Chukwueze alụghị nwanyị n’oge a na-ede akụkọ ndụ a.
Ihe kpatara ya, ihe kpatara na Chukwueze enweghị enyi nwanyị a maara, enweghị ike njikọ na eziokwu na ọ nwere ọnwa ole na ole na-agba egwu bọọlụ kacha elu. Dị ka ndị dị otú a, ọ na-etinye oge na mgbalị dị ukwuu iji mee ka ọrụ ọhụụ ya dị elu.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Ezi Ezinụlọ
Ezinụlọ abụghị naanị Chukwueze dị mkpa, ọ bụ ihe niile ka winger. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị ezinụlọ Chukwueze yana ịkọwapụta ihe ndekọ nke usoro nna nna ya.
Banyere nna na nne Samuel Chukwueze: Amaghi ndi nne na nna Chukwueze n’ide aha ha n’oge edere ihe ndia, ebe amaghi otutu ihe banyere otu ezi na ulo ha. Agbanyeghị, onye ahụ kwuru gosiri na nna ya bụ onye ozi Chukwu ebe mama ya nọọsụ kemgbe ọ bụ nwata. Ndị nne na nna na mbụ megidere mbọbọ Chukwueze mana ha enweghị nhọrọ karịa inye ya ngọzi ha tupu ya agaa Portugal maka asọmpi Iber Cup nke ndị ntorobịa 2013.
Mama m na nwa mbụ ya na foto mara mma nke na-ekwu maka mmekọrịta ịhụnanya ha.
Banyere Samuel Chukwueze ụmụnne na ndị ikwu: Chukwueze bụ nwa mbụ n’ime nne na nna atọ mụrụ. O nwere nwanne nwanyị nke ntà na nwanne nwoke nwoke amaghi ihe n'oge edere. Ha abụghịkwa ndekọ banyere nna nna ya karịsịa nke ndị nne na nna ya ochie yana nna nna na nne nne. N'otu aka ahụ, a maghị ụmụ nwanne nna Chukwu, nwanne nne ya na nwanne nne ya ebe amabeghị nwanne ya na ụmụ nwanne ya n'oge ọ na-ede akwụkwọ.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Ezigbo Ndụ Onye
Site na Chukwueze nke nwere mmasị na ndị na-agbachitere egwu, ọ nwere ụdị omume mara mma nke na-egosipụta ya dị ka onye dị ala, onye na-arụsi ọrụ ike, nke dị mma ma na-adị mfe. Tụkwasị na nke Chukwueze bụ omume ya ịghara ikpughe ọtụtụ ihe gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya.
Onye ọkpọ a na-ahụ maka akara Aries Zodiac na-eduzi ọtụtụ ọrụ na-agafe maka ọdịmma na ntụrụndụ ya. Ihe omume ndị ahụ gụnyere igwu egwu vidiyo, ige egwu egwu yana iwepụta oge iji soro ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Egwu bu nri nkpuru obi Chukwueze. A na-ese ya ebe a ka ọ na-ekpori egwu mgbe ọ nọ n'ụgbọ mmiri.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Eziokwu Nzuzo
Banyere otu Samuel Chukwueze si eme ya ma mefuo ego ya, a na-enyocha ego ya n'oge edere mana ọ nwere uru ahịa nke € 30 nde ma na-enweta ezigbo ego na ụgwọ na ụgwọ maka igwu egwu na otu egwuregwu Villarreal.
Dị ka ndị dị otú a, onye ọkpọ ahụ na-ebi ụdị ndụ okomoko dịka egosiri ọ na -emefu ego gosipụtara. Agbanyeghị uru ụlọ ma ọ bụ ụlọ nke Chukwueze bi n'ime ya amabeghị, nchịkọta ụgbọala ya na-anya isi njem Mazda MX-5 Miata nke nwere ike ịgbanwe ebe ọ na-aga ịchọta ụzọ ya na Spen.
Samuel Chukwueze na-agba egbe maka ụgbọ ala ya Mazda MX-5 Miata Convertible.
Samuel Chukwueze Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nsogbu - Eziokwu efu
Ka anyị kwụsị ịkọ akụkọ Samuel Chukwueze na akụkọ ndụ nwata, ebe a bụ ndị amachaghị ma ọ bụ akụkọ gbasara oke banyere winger.
Religion:A mụrụ Samuel Chukwueze n’ezinaụlọ Ndị Kraịst wee zụlite n’usoro okwukwe nke okwukwe Ndị Kraịst. Agbanyeghị na ọ gaghị n'okpukpe n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ, ekwenyere na ọ bụghị Onye Kraịst na-enweghị mmasị.
Ogbugbu: Uwe - nke dị elu nke ụkwụ 5, sentimita asatọ - enweghị ọrụ ahụ n'oge a na-ede akụkọ ndụ a. Agbanyeghị, ịgọnahụ na ọ nwere ike igbu egbugbu mgbe o gosipụtara onwe ya n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ kacha mma n'ụwa.
Foto gosiri na Samuel Chukwueze enweghị egbugbu.
Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ: Ndị nne na nna Samuel Chukwueze mere ka ọ kwụsị ị ofụ mmanya na ị smokingụ sịga. E nwetụbeghị ị drinkingụ ma ọ bụ ị smokingụ sịga na igwefoto. N'ịtụle ebe o si bịa, o doro anya na onye winger agaghị etinye aka na omume na-emerụ ahụ nke nwere ike itinye ọrụ ya n'ihe egwu.
Nyochaa: Daalụ maka ọgụgụ anyị Samuel Chukwueze Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na-adịghị Eke Agbanwe. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanwee: Ọktọba 11, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 20, 2020